Myalwar-Diary: August 2007
မြလွှာ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က မြလွှာကို စာအုပ်လေးတစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးတယ်.. မြလွှာကလည်း... စာအုပ်ဆိုရင်လာခဲ့ပဲလေ...... သူကိုကျေးဇူး တင်ပါတယ်ပြောပြီး........ စာအုပ်ကိုတန်းပြီး... ကြည့်တော့တာပါပဲ...... "အရှင်ဆန္ဒဓိက " ရဲ့"ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ် " တဲ့လေ…. မြလွှာလည်းတွေးလိုက်မိတယ်… မြလွှာတို့ရဲ့ စိတ်တွေကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံများ စစ်ရမှာပါလိမ့်ပေါ့…. တကယ်တော့.. ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ် ဆိုတာ… မှန်ကြည့်တာနဲ့ တူတူပါပဲတဲ့လေ…. မြလွှာတို့လူတိုင်းလူတိုင်း…. တစ်နေ့ကို မှန်တစ်ကြိမ်တော့ ကြည့်ဖြစ်ကြမယ်နဲ့တူတယ်နော်…. ဒါပေမယ့် မြလွှာတို့လို မိန်းကလေး တွေက ပိုလိုတောင်ဆိုးသေး…. တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်မက ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်…. မြလွှာဆိုရင်… တစ်ကြိမ်မက ကြည့်တတ်တယ်… ဟိုးရှေးရှေးက ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ စကားပုံလေးကို သတိရလိုက်မိတယ်… အကျည်းတန်မှန်ကြိုက်ဆိုလား…ဘာလားလေ….. ရုပ်ဆိုးလို့လားတော့သိပါဘူး…. လူတွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကို ကြာပွင့်အဆင့် ရောက်နေပြီလို့…ထင်မှတ်နေပေမယ့်… မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ "တရားဓမ္မမှန် " ထဲမှာ သေချာကြည့် လိုက်တော့မှ ကြာဖူးအဆင့်ပဲရှိနေသေးမှန်းအတိအကျ သိလိုက်ကြရတာပါ….… မြလွှာတို့လို ပုထုဇဉ်လူသား အများစုရဲ့ စိတ်ဟာ ကြာဖူးအဆင့်ပဲ ရှိတာပါ.. ဒါပေမယ့် လူသားတွေရဲ့ သဘာဝက ကိုယ်စိတ်ကိုယ် ကြာပွင့်အဆင့် ရှိနေပြီလို့ ထင်မှတ်နေကြသူများပါတယ်… လူတိုင်းအပေါ်တကယ် မေတ္တာမထားနိုင်သေးပဲ…. ထားနိုင်ပြီထင်နေတာ… လူတိုင်းအပေါ် အကောင်းမမြင်နိုင်သေးဘဲနဲ့ မြင်နိုင်ပြီထင်နေတာ…. လူတိုင်းအပေါ်သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း မရှိသေးဘဲနဲ့ရှိနေပြီလို့ထင်နေတာ…..ဒါတွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့ကြာဖူးအဆ့်ကိုကြာပွင့်အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ ထင်မှတ်နေကြတာပါပဲ….စိတ်ရဲ့ဘယ်သဘာဝဟာ မကောင်းတဲ့သဘာဝလဲ…. ဘယ်သဘာဝကကောင်းတဲ့ သဘာဝလဲဆိုတာ…. အမှားအယွင်းမရှိ်…အမှန်အတိုင်းသိနိုင်ဖို့ကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့"တရားဓမ္မမှန်"ကလွဲလို့….တခြားအားကိုးစရာ… မရှိတော့ပါဘူး…..မြလွှာတို့တွေ မှန်ကြည့်တိုင်း ….မှန်ကြည့်တိုင်း…. မှန်ထဲမှာ မြလွှာတို့ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်….မိမိရဲ့ပုံရိပ်မှာ မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ ကောင်းတဲ့သဘောဆိုပြီး….သဘော(၂)မျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်…. မြလွှာတို့ရဲ့ မှန်တွေထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြားအခြားသော မကောင်းတဲ့သဘောတွေ မဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်…ကောင်းတဲ့သဘောလေးကို တွေ့ရရင်လည်း…. လောလောဆယ်တွေ့နေရတဲ့….ကောင်းတဲ့သဘောလေးကို တည်တံ့နေအောင် ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်… အခြားအခြားသော…နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့….. သဘောတရားလေးတွေကိုလည်း…ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံအောင်….လှသည်ထက်လှ…ချောသည်ထက်ချောသွားအောင်…ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာပါ…
အဲဒီလို သဘော(၂)မျိုး အပေါ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်(၄)မျိုး နဲ့ မှန်ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်… မိမိရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လှပတင့်တယ်အောင် အချိုးအစားကျကျလှအောင်… ပြုပြင်အားထုတ်လို့ ရသလို…မြလွှာတို့ရဲ့စိတ်ကို လှပအောင်လည်း တစ်ခါထဲပြုပြင် သွားလို့ရတာပေါ့နော်…..
Posted by myalwaryone at 7:55 PM 1 comment:
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး... နီးနီးလေး....(သတိရတိုင်း အနားမှာရှိတယ်...)
မြလွှာ ခုရေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့....လူတိုင်းပြောပြောနေကြတဲ့... "သတိရခြင်း "...ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါပဲ... လူတွေ သတိရတယ်ဆိုတာ ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုပါ.... တစ်ချို့က အိမ်ကိုသတိရတယ်... တစ်ချို့က ချစ်သူကို သတိရတယ်... လွမ်းတယ်ပေါ့ရှင်... တစ်ချို့ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတယ်... တစ်ချို့ကလည်း အိမ်နဲ့ဝေးနေတော့ မိဘ ကိုသတိရတယ်ပေါ့နော်... အင်း... သတိရခြင်းတွေမျိုးစုံပါပဲ... မြလွှာလည်း လူထဲကလူပဲလေ... မြလွှာမှာလည်း သတိရခြင်း ဆိုတာ....ရှိတာပေါ့နော်.... သတိရတယ်... သတိရတယ်ဆိုတာ... လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ကိုသတိရနေရင်... အဲဒီလူနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေဝေးနေ.... နီးနီးလေးပါပဲ.... သတိရတယ်ဆိုတာ... စိတ်သက်ဝင်တယ်.. စိတ်သက်ရောက်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်... သတိရတယ်ဆိုတာ... လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မြင်နေတာ... ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူ.. ကိုယ်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ သူ့ဆီကို စိတ်ကရောက်သွားတာပါပဲ....အဝေးမှာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်ဆီ မြလွှာတို့ရဲ့စိတ်တွေရောက်သောအားဖြင့်... သတိရနေရင်... အဲဒီတစ်ယောက် ယောက်ဟာ.... ကိုယ်နဲ့နီးနေပါတယ်... အဲဒီတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး.... နီးနီးလေးပါပဲ....လူတစ်ယောက်ကို သတိရလိုက်တာ နဲ့တစ်ပြိုင်နက်.. အဲဒီလူဟာ ကိုယ့်အနား ရောက်လာတော့တာပါပဲ.... မျက်စိရှေ့မှာ ရောက်နေတာ မဟုတ်ပေမယ့်.... စိတ်ရဲ့ အရှေ့ကို ရောက်လာတာပေါ့နော်.... စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလူရှိနေတာဟာ... ကိုယ်ရဲ့အနားမှာ အဲဒီလူ ရှိနေတာနဲ့ အတူတူပဲလေ.... မျက်စိရှေ့မှာ ရှိနေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ မရှိရင်တော့... နီးလျက်နဲ့ဝေးနေပါတယ်... မျက်စိရှေ့မှာ မရှိပေမယ့်... စိတ်ထဲမှာရှိနေရင် ဝေးလျက်နီးနေပါတယ်.... မျက်စိရှေ့မှာ ရှိဖို့ထက် စိတ်မှာရှိဖို့က ပိုလို့ အရေးကြီးတာပေါ့နော်.... မျက်စိရှေ့မှာလည်းရှိ... စိတ်မှာလည်းရှိရင်တော့.. အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ရှင်.......
" မျက်စိရှေ့မှာ ရှိနေပေမယ့်..
မြလွှာကလည်း အဲဒီလိုပဲနော်...ဟီး.... မြလွှာလည်းသတိရနေလို့ရေးလိုက်တာ....
Posted by myalwaryone at 2:03 PM No comments:
Posted by myalwaryone at 2:51 PM No comments:
မြလွှာ ဒီနေ့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး.... သူများ tag လုပ်တာတွေကိုပဲ ခံနေရတယ်... စောစောစီးစီး...မောင်လေးပုဂံသားက tag လုပ်ထားပါတယ်တဲ့..... သူ tag ထားတာကို ဖြေပြီးလို့မှ မပြီးသေးဘူး....မမလေးမက မြလွှာရဲ့ cbox မှာ လာအော်တယ်... သူလည်း မြလွှာကို tag ထားပါတယ်တဲ့လေ.... အဲဒါ သူအော်လို့မှ မဆုံးသေးဘူး.... မောင်လေး Calculator က မြလွှာကို tag ထားပြန်ရောတဲ့... .ဒီနေ့ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်... မမလေးမရေ... မမ tag တာကတော့ မောင်လေးပုဂံသားနဲ့ တူလို့ မြလွှာ တူတူပဲ ပေါင်းဖြေလိုက်တော့မယ်နော်.... မြလွှာကို စိတ်ဆိုးနဲ့အုံး..... မောင်လေး Calculator ရေ... မောင်လေးရဲ့ tag ကိုမြလွှာ ဖြေမယ်နော်....
မြလွှာက အိမ်ကနေ နေ့တိုင်း အကြိုအပို့ လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့..အမှန်ပြောရရင်.. မြလွှာ အဲဒါတွေကို သိပ်မသိဘူး.... မြလွှာ မစပ်စုမိတာလည်း ပါမှာပေါ့နော်... မောင်လေးမေးထားတဲ့ tag မေးခွန်းတွေကို မြလွှာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်... နောက်တစ်ခါ မြလွှာသိတာလေးတွေကိုပဲ... tag လုပ်နော်....
Posted by myalwaryone at 7:36 PM No comments:
မောင်လေးပုဂံသားက မြလွှာကိုချောကလက်ကျွေးပါမယ်တဲ့ ...... ချောကလက်ကျွေးပြီးတော့ Tag လုပ်တော့တာပါပဲ........ သူ Tag လုပ်တော့လည်း မြလွှာက ဖြေရတော့မှာပေါ့လေ......... အကြိုက်ဆုံး အဟောင်း (၅ခု) တဲ့လေ..... သူဟာက အများကြီးလည်း ဟုတ်ဘူး.... ၅ခုပဲတဲ့လေ... မြလွှာ အကြိုက်ဆုံး Post ၅ခု ကတော့....
(၁) မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး...(မြလွှာရဲ့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေးလေ...... မြလွှာ အိမ်မှာ ထမင်းစားတိုင်း.. ဒီ Post လေးအကြောင်းကိုသတိရနေမှာပါ...)
(၂)စိတ်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်...(မြလွှာ ကအင်မတန် စိတ်ကောက်တတ်လွန်းလို့ ....မြလွှာကိုယ်တိုင်... သတိပေးတဲ့ Post လေးပါပဲ)
(၄)အမေရှိလျှင်............. (မြလွှာ အမေတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို လူတိုင်း လေးစားတတ်အောင်ပါ..)
(၅)တစ်တို့ နှစ်တို့ မြည်းကြည့် ကြပါနော်...
ဟဲဟဲ.... မြလွှာကတော့ လည်လည်လာသူတွေကို မ Tag တော့ဘူးနော်... တော်ကြာ များသွားမှာ ဆိုးလို့.... မြလွှာပြန် tag ချင်သူတွေကတော့.....ဒီလိုဒီလိုပါပဲ....များကြီး မ Tag တော့ဘူးနော်.....
(၂)သူငယ်ချင်း..tzm( သူက ဟိုတခါ မြလွှာကို Tag ထားလို့ ပြန် tag တာလေ...)
Posted by myalwaryone at 1:54 PM No comments:
မြလွှာ တို့လူတိုင်းလူတိုင်းက အဆင့်အတန်း မြင့်မြင့်နေချင်ကြတာပေါ့နော်… အဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့ သူတွေဆိုရင်… လူတွေက အင်မတန်လေးစားကြတယ်… အင်မတန်လည်း စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့နော်… သူက အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်..ကိုယ်က အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်…..ဆိုပြီး…. အမြဲတွေးတတ်ကြတယ်.. အဆင့်အတန်းနိမ့်နေတဲ့ သူတွေဆိုရင်… လူတိုင်းက လေးလေးစားစား… မဆက်ဆံတတ်ကြဘူးနော်… စဉ်းစားစရာကောင်းတာက… အဲဒီ အဆင့်အတန်းကို မြလွှာတို့ ဘာနဲ့ တိုင်းတာကြမလဲ….. ??? ဘာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြမလဲ ?? …. ငွေ၊ ဂုဏ် ၊ရာထူးတွေနဲ့ တိုင်းတာမှာလား…. အသိဥာဏ်၊ အကျင့်စာရိတ္တ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား တို့နဲ့…တိုင်းတာမှာလား…. စိတ်နေသဘောထား အသိဥာဏ်မြင့်မားလာလေလေ သဘောထားတွေကြီးလာလေလေပေါ့နော် ။ သဘောထားတွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ မြလွှာတို့ထက် အဆင့်အတန်းမတူညီတဲ့ သူတွေကိုလည်း မုဒိတာများများထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အဆင့်အတန်းဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အခြေအနေကို ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဘ၀ဆိုတာ စိတ်ထားနဲ့တန်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့လေ ။ ကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာနိမ့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နိမ့်တဲ့ဘ၀ အခြေအနေကိုပဲပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ မြလွှာတို့မှာ ရှိတဲ့အသိဥာဏ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားသွားလေလေ၊ လောကကြီးဟာ ပိုပြီးနက်နဲလာလေလေပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မြင့်မားလာတာနှင့်အမျှ လောကကြီးဟာလည်း ပိုပြီးကြီးကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ လူတစ်ဦးစီမှာကိုယ့်စိတ်နဲ့၊ ကိုယ်အသိဥာဏ်နဲ့ ကိုယ်မြင်ရ၊ သိရ၊ ခံစားရတဲ့ ကိုယ်လောကထဲမှာ ကိုယ်စီနေနေကြတာပါ။ စိတ်ဓာတ်ချင်း၊ အသိဥာဏ်ချင်း မတူရင် လောကချင်းလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ သူနိမ့်မှကိုယ်မြင့်မယ်လို့ သဘောထားတာဟာ အင်မတန်သေးသိမ်တဲ့ သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေးသိမ်သွားအောင် လုပ်ချင်ပါသလား။ ကိုယ့်ကိုအောက်တန်းကျတဲ့လူဖြစ်သွားအောင် သူများလုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ တခြားသူ လုပ်ယူလုပ်ယူလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ မြလွှာ ရလိုက်တာလေးကို အားလုံးကို မျှဝေလိုက်တယ်နော်…..
Posted by myalwaryone at 10:15 AM 1 comment:
မြလွှာခုတလော ဘာတွေရှုပ်နေမှန်းကို မသိဘူး….. တနေကုန်လည်း ရုံးမှာ မအားရ… အတန်းချိန်တွေကလည်း ဆက်နေတော့လည်း အရမ်းပင်ပန်းတယ်…. ရုံးကနေအိမ်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့တန်းပြီး… ထမင်းစား … ခဏနားပြီးတော့ တန်းအိပ်တော့တာပဲ… မြလွှာခုတလော… အိမ်မှာ အိပ်လိုက်..စားလိုက်နဲ့ပဲ….. ဘာစာအုပ်မှလည်း သေချာ မဖတ်ဖြစ်ဘူး…. နောက်တော့ မြလွှာတစ်ခုစဉ်းစားမိလာတယ်….. မြလွှာရဲ့ အိမ်လေးကို နေ့တိုင်းလည်လည်လာပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေရှိတယ်… သူတို့ကလည်း.. မြလွှာအသစ်တင်မယ့် Post ကိုစောင့်မျှော်နေကြပြီ….. မြလွှာရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ စောင့်ရကျိုးနပ်အောင် မြလွှာ Post တွေတင်ရတော့မယ်…. Post တွေတင်နိုင်ဖို့ မြလွှာ စာတွေကို ဖတ်ရတော့မယ်…. မြလွှာခု အဲဒီ စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ မြလွှာ ခုစာတွေဖတ်နေ တယ်နော်…..
Posted by myalwaryone at 5:11 PM2comments:
မြလွှာရဲ့ Blog မှာ ကော်ကော်တိုတ်ဖို့ လာလာအော်နေတဲ့ သယ်ချင်းလေးတွေရှိတယ်..... မြလွှာကို ခင်တဲ့ သယ်ချင်းအားလုံးအတွက်.... မြလွှာကော်ကော်တိုတ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်..... ကြိုက်တာကို ရွေးသောက်နော်.... မြလွှာရဲ့အိမ်လေးကို အမြဲတမ်းလည်လည်လာကြလို့ ကျေးကျူးနော်...
Posted by myalwaryone at 11:06 AM No comments:
4.8.07 နေ့က မြလွှာရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက မြလွှာရဲ့Cbox မှာ လာပြောကြတယ်။ ကုမုဒြာ ဂျာနယ်မှာ ပါတယ်ပေါ့။ မြလွှာလည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ဘယ်နားမှာပါတာပါလိမ့်ပေါ့။တစ်နေကုန် စိတ်ကအရမ်းသိချင်နေတယ်။ ဒါနဲ့နောက်ဆုံး အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာ ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို တွေ့အောင် ရှာပြီး ၀ယ်ဖတ်မိတော့တာပေါ့။ မြလွှာရဲ့ဘလော့ဂ်ပုံလေးကို သုံးထားတဲ့အတွက် ဆရာဦးကျော်ရင်မြင့်ကိုလည်း မြလွှာအရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မြလွှာပြောချင်တဲ့ အကြောင်း၊ ပေးချင်တဲ့အသိကို စာကြောင်း (၄)၊ (၅)၊(၆)ကြောင်းလောက်နဲ့ ထိထိမိမိရေးနိုင်တဲ့ ဆရာ့ကို မြလွှာအင်မတန်လေးစားမိပါတယ်။ မြလွှာရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲနဲရှိတာကြောင့် မြလွှာရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမှာ??? တွေပေါ်တာကိုတော့ မြလွှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဘာပဲပြောပြော လူငယ်တွေကြားမှာ ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ဒီလိုရှိပါလား၊ ဒီလိုတွေရောရေးနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကို မြလွှာတို့ ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကြည်နူးမိပါတယ်။ ဒါလေးတွေဟာမြလွှာဘလော့ဂ်လုပ်နေသမျှ၊ ရေးနေသမျှ၊ ဖန်တီးနေသမျှ ကာလတစ်လျှောက်မှာ မြလွှာအတွက် အမှတ်တရလေးတစ်ခုပါပဲ။
Posted by myalwaryone at 10:55 AM No comments:
မြလွှာ ဒီနေ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ ထမင်းစားနေရင်းကနေ… VCD တစ်ခွေကို မြလွှာ မောင်လေးယူလာလို့ ကြည့်လိုက်မိတယ်… အရင်ကဆို မြန်မာ ဗွီစီဒီတွေဆို သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်….. မြလွှာတို့အချိန်တွေကုန်တယ်…. ပြီးတော့..တစ်နေကုန် စာသင်၊ Computer သုံးနေတဲ့ သူဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်စိကိုလည်း မြလွှာတို့ အနားပေးရအုံးမယ်လေ... အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ မြလွှာတို့ဘာမှ ရလိုက်တယ်မရှိဘူး... မင်းသား နှင့် မင်းသမီး ချစ်ကြိက်ညား ဇာတ်ကားတွေက အင်မတန်များပါတယ်.... ဒီနေ့ မြလွှာကြည့်မိတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ .... လူတွေမှာ မေ့လျော့နေတတ်တဲ့ စိတ်ပေါ့နော်.... အဲဒီစိတ်တစ်ခုကို မြလွှာ ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း ချက်ချင်းရလိုက်တယ်... ငါလည်း ဒီနေရာမှာဆို ဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးလည်း ၀င်လာမိတယ်.... အရင်က ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်..... ဒါနဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ... သီလဆိုတာ ဘယ်လိုမှန်းမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်က.... တစ်ကယ်တန်းသေသွားခဲ့ရင်.... နေစရာနေရာမရှိ...... သွားစရာမရှိ ....စားစရာမရှိ.... နောက်ဆုံး... သောက်စရာရေက အစ.... မရှိပုံကို ရိုက်ပြထားတာပါ.... ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်.... မြလွှာဒီနေ့ အဲဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်လိုက်ရလို့.... မြလွှာမှာ လိုအပ်နေသေးတဲ့ ဒါနတွေ ၊ သီလတွေ ကို သိလာရတယ်....
မြလွှာရလိုက်တာလေးကို အားလုံးကို ဝေမျှလိုက်တယ်နော်.....
Posted by myalwaryone at 3:44 PM No comments: